Feature News – Page 25 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
असल नेता कसरी बन्ने ?–चाउ एन लाइ(अप्रिल २२, १९४३)
१. नेताको परिभाषा जोसुकै कार्यकर्ताले कहिलेकाहीं नेतृत्वको काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ र उनले यो काम गरिरहेको हुनु धेरै सम्भव छ । तसर्थ, नेतृत्वको काम निम्न, मध्यम वा उच्च, सबै स्तरका नेतृत्वदायी कार्यकर्ताहरुसित सम्बन्धित काम हो । होङ्यान र चेङ्शीयानमा८ स्टाफ सदस्यहरुको माझमा प्रत्येकले गर्ने कामको किसिममा मात्र भिन्नता छ, तर नेता र अनुयायीहरुको माझमा कुनै […]
Posted in: Feature NewsLeaveacomment
भूकम्पपीडितले पाउने भए एकमुष्ठ डेढ लाख
काठमाडौं । झण्डै १५ महिनाअघि गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि घरबारविहीन परिवारले एकमुष्ठ डेड लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पीडितलाई आवास निर्माण गर्न एकमुष्ट रुपमा दुई लाख रुपैयाँ र दुई प्रतिशत ब्याजदरमा १५ र २५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । भूकम्पपीडित जनतालाई आवास निर्माण गर्न एकमुष्ठ […]
Posted in: Feature News, National NewsLeaveacomment
आज असार १५ अर्थात धान दिवस
काठमाडौँ । आज असार १५, किसानहरुका लागि आजको दिन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । ‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने’ दिनका रुपमा आजको दिनलाई मानिन्छ । असार १५ लाई धान दिवस रुपमा मनाउने चलन छ । कृषि प्रधान देश भएकाले नेपालका अधिकांश मानिसको पेसा खेतीपाती हो । किसान वर्षभरका लागि छाक जुटाउन यो महिनामा खेतीमा व्यस्त हुन्छन् । […]
संसदको अवरोध हटाउन बसेको कार्यदलको बैठक निश्कर्षबिहीन
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदमा नेपाली काँग्रेसले जारी राखेको अवरोध हटाउनेबारे सहमति जुटाउन बसेको प्रमुख चारदलीय कार्यदलको बैठक निश्कर्षबिहीन भएको छ । कार्यदलको बैठकमा कुनै सहमति हुन नसकेपछि मंगलबार दिउँसो शीर्ष तहमा नै छलफल हुने बताइएको छ । भूकम्प पीडितलाई तत्काल एकमुष्ट दुईलाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । […]
Posted in: Feature News, PoliticsLeaveacomment
कोपा अमेरिका कपको उपाधि चिलीलाई, मेस्सी पेनाल्टीमा चुके
काठमाडौं । चिलीले लगातार दोस्रो पटक कोपा अमेरिका कपको उपाधी जितेको छ । सोमबार बिहान भएको फाइनलमा अर्जेन्टिनालाई ट्राइबेकरमा ४–२ ले पराजित गर्दै चिली च्याम्पियन बनेको हो । निर्धारित ९० मिनेट र थप गरिएको ३० मिनेटमा समेत गोल हुन नसकेपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुटआउटमार्फत गरिएको हो । पेनाल्टी सुटआउटमा अर्जेन्टिना दोस्रो पटक चुकेको हो । […]
Posted in: Feature News, SportsLeaveacomment
करिष्मा मोडलीङ पोज
बन्दुक नियन्त्रणको मुद्दासहित डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसद धर्नामा
एजेन्सी । अमेरिकामा बन्दुकको बिक्रीमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने मुद्दालाई लिएर डेमोक्रेटिक पार्टीका करिब एक सय जना सांसदहरु अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा धर्नामा बसेका छन् । बन्दुक खरिद गर्ने व्यक्तिको पूर्ण पृष्ठभूमिको व्यापक जाँच गर्नुका साथै चरमपन्थीका लागि बन्दुक बेच्न पूर्ण रुपमा रोक्न उनीहरुले माग गरेका छन् । सदनमा लगातार ११ घन्टासम्म विरोध प्रदर्शन जारी रहेपनि सदनका अध्यक्ष रिपब्लिकन […]
Posted in: Feature News, International NewsLeaveacomment
मेस्सी अर्जेन्टिनाका सर्वाधिक गोलकर्ता, कुन खेलमा कति गोल ?
काठमाडौं । स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेस्सी अर्जेन्टिनाका सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका छन् । बुधबार बिहान भएको खेलमा फ्रिकिक मार्फत गोल गर्दै सर्वाधिक गोलकर्ता रहेका ग्राब्रियल बाटिस्टुटाको कीर्तिमान भंग गर्दै आफ्नो नाममा लेखाएका हुन् । उनले अमेरिकाविरुद्ध २५ यार्ड टाढाबाट उत्कृष्ट गोल गरेका थिए । बाटिस्टुटाले अर्जेन्टिनाका लागि ७८ खेल खेल्दै ५४ गोल गरेका थिए । उनले […]
एक शताब्दी पुरानो हो पाकिस्तान–अफगान सीमा विवाद
एजेन्सी । हाल पाकिस्तान–अफगानिस्तान सीमामा बढिरहेको तनाव एक शताब्दी पुरानो क्षेत्रीय विवादको हिस्सा हो । केही अफगानिस्तानीहरुले यस क्षेत्रीय विवादतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित गर्नका लागि पाकिस्तानले यो तनाब बढाएको आरोप लगाएएका छन् । केहीदिनअघि मात्रै पाकिस्तान अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्र तोर्खममा भएको गोलाबारीमा एक पाकिस्तानी मेजरको समेत मृत्यु भएको थियो । पाकिस्तानले सो क्षेत्रको सीमामा […]
Posted in: Feature News, Tippani BislesionLeaveacomment
झटारो : शुभलाभका लागि नाङ्गै दौडिनेहरु !